PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - Sarungano mudzidzisi
Kwayedza - 2018-12-07 - Denhe Reruzivo - Munyaradzi Gunduza
SARUNGANO vaiva ambuya kana sekuru vane utsome pamwe neuseza hwenharaun­da nemararami­ro aitarisirw­a mutsika namagariro avatema. Sarungano aive akangofana­na nebhuku, mudzidzisi kana sahwira nokuti aipa vana ruzivo, uye rairo dzinodiwa maringe neupenyu hwavatema.
Aitorwa sebhuku sezvo mubhuku murimo munowanikw­a ruzivo, uye mhinduro dzezvinhu zvakasiyan­a-siyana izvo vanhu vanenge vasina ruzivo pamusoro pazvo.
Sarungano aipa vana mhinduro pamibvunzo yaibata nharaunda sokuti sei dzimwe mhuka dzichigara mumvura, dzimwe dzakapusa, dzimwe chichimhan­ya kupfuura dzimwe, dzimwe dzisina muswe, uye dzimwe dzichigara musango dzimwe pamusha.
Pakupa mhinduro idzi, sarungano ainge atoshanda zvakangofa­nana nezvinoitw­a nemabhuku ayo anotsanang­ura mamiriro akaita nharaunda pamwe nezvisikwa zvakasiyan­a. Sarungano ndiye zvakare aichengete­dza chivanhu pamwe netsika namagariro avatema kuburikidz­a nekudzidzi­sa vana unhu hunotarisi­rwa zvichibva mungano. Mungano maibuda zvidzidzo zvakawanda kwazvo zvaidzidzi­sa zvinhu zvakasiyan­a zvinosanga­nisa kushanda nesimba, kudya zvesimba rako, kugara nevamwe zvakanaka, kukosha kwehukama nekuchenge­tedza zvibvumira­no zvichingod­aro.
Vana vaidzidzaw­o ngano kubva kuna sarungano izvo zvaivabats­ira kuti vazovewo nyanzvi mukutaura ngano idzi kune vamwe vavo. Nokudaro, sarungano aive denhe reruzivo.
Kana rungano rwuine rwiyo, sarungano aive nebasa rekushaura rwiyo pamwe nokudzidzi­sa vana nziyo nemaimbirw­o adzo.
Pakuita ngano, sarungano haaigona kuita ngano ari oga pasina vateereri nokuti ndivo vaimupa manyawi okuita ngano. Vateereri vaibvumira nziyo dzaiimbwa nasarungan­o, uye sarungano aipa vateereri nguva yekuti vambodzoko­rorawo ngano dzaainge achivaudza achida kuona unyanzvi hwavo mukubata zvavanenge vadzidza.
Sarungano aishanda semudzidzi­si anopa vana bvunzo pamwe nebasa rekuita kuti aone kana vakwanisa kubata zvavanenge vadzidza. Nokuda kwehocheko­che iripo pakati pasarungan­o nevateerer­i, zvinoratid­za kuti pasina sarungano hapana rungano, uye pasinawo vateereri hapana rungano sezvo sarungano aisakwanis­a kuita ngano ari oga.